တရုတ်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(643 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံးနဲ့စီးပွားရေးအရဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, စက်မှုကုမ္ပဏီကြီး, ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ပုလဲ, လောကီ၌ဤတတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံအတွင်းရှိအဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအပါအဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံး spheres ကို, ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ကြောင်း ။
တရုတ်ဟာသူတို့ရဲ့လုံ့လဝီရိယနှင့်ထိရောက်မှုလူသိများပေမယ့်ဒီလူတွေကတဦးထက်ပိုသောအင်္ဂါရပ်ဂိမ်းများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်လောင်းကစားအများအပြားထောင်စုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့ထင်ရှားတိုင်းပြည်များ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းမှနီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါဂိမ်းအကြောင်းအရာအကျော်ကြားဆုံးထုတ်လုပ်သူများသေချာပေါက်, သူတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအကြားတရုတ်အပါအဝင်အရှေ့ပိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏သင်္ကေတတွေနဲ့ attribute ကိုသုံးပါရာအာရှပုံပြင်များ, အတူဒါခေါ်, ဂိမ်းများရှိသည်။ စသည်တို့ကိုဆစ်ဘို, Mahjong, တရုတ်ဖဲချပ်ဝေ (13 ကဒ်များ), ပန်ကာ-tan: အပြင်, ဂန္စားပွဲပေါ်မှာနှင့်ကဒ်ဂိမ်းတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်အာရှဂိမ်းအတော်များများရှိပါတယ်
ထက်ပိုမို 1 ဘီလီယံအထိလူဦးရေနှင့်အတူကြီးမားတဲ့တိုင်းပြည်များ၏နယ်မြေထဲမှာလောင်းကစားဝိုင်းလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဘာတွေလဲ? အဘယ်အရာကိုဥပဒေများကိုဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်?
ထိပ်တန်း 10 တရုတ်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ရာစုအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ, လောင်းကစားဝိုင်း၏ဗဟိုရှန်ဟိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ. ခေတ်နှင့်တိုင်းပြည်များ၏အစိုးရ, ပြောင်းလဲသွားတယ်ပြီပီအာစီ၏ကိုလိုနီနယ်မြေများများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုတှေရှိခဲ့တယျ - နှင့်တိုင်းပြည်၏လက်တွေ့အားလုံးဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအာရုံစိုက်သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ခုတည်းသောဂိမ်းဧရိယာခြိနျးတှေ့ဖို့မြို့ဖြစ်၏ မကာအို၏ (ပေါ်တူဂီ၏ယခင်ကိုလိုနီ, 1999 ကတည်းကက PRC, တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကမ်းနားတွင်တည်ရှိပြီးမြို့အစိတျအပိုငျးဖြစ်လာခဲ့သည်) ။ အရှေ့ Monte Carlo, ဒုတိယ Las Vegas မှာ - အဖြစ်မကြာမီတရုတ်ဂိမ်းအဘို့မိမိတို့အငတ်ပြေဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှခရီးသွားဧည့်အာရှသားများဧည့်ဝတ်ပြုပျော်မွေ့ရာအရပ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ဤရောင်စုံထောင့်, မချေါမအဖြစ်။ ဤမြို့သည်ပြီးသားအကြိမ်ပေါင်းများစွာလောင်းကစားလုပ်ငန်းလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ Las Vegas မှာမှီဖို့စီမံထားပါတယ်။
မကာအို၌, ဂန္ desktop နဲ့ကဒ်ဂိမ်းများကိုပိုမိုထက် 30 ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, slot ကစက်တွေလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဘာသာစကား Venetian မကာအို - ဒါ့အပြင်မကာအိုအတွက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးလောင်းကစားရုံဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးဧည့်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအတွက်စီစဉ်ပေးသောမွို့၌, ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်းဟိုတယ်နှင့်ဟိုတယ်များ, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အရက်ဆိုင်, စျေးဆိုင်များနှင့်ကခုန်ကလပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
တရုတ်အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ
တရုတ်နိုင်ငံတွင်ယဉ်ကျေးမှု, သင်တန်း, ဥရောပတဦးတည်းအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်နိုင်ငံခြား (အများအားဖြင့်အမေရိကန်) ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများထွန်းပြီးနောက်, မကာအိုအတွက်ယေဘုယျလေထုနှင့်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများအများကြီးပျော့ပျောင်းခဲ့ကြပေမယ့်အချို့ပိုင်ထိုက်သော, အထဲတွင်ရှိနေပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်မဆိုတိုင်းပြည်ကနေလောင်းကစားရုံဧည့်သည်ကအရမ်းသက်သာခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စသည်တို့အသက် 18 နှစ်ကျော်သာလူများတို့သည်လောင်းကစားရုံများတွင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်ကတည်းကနီးပါးအမြဲကတစ်ဦးရဲ့အထောက်အထားကဒ်သယ်, အစောင့်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဖို့မတစ်စားဆင်ယင် code ကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, ဥပမာအားဖြင့်, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းကိုမေ့လျော့မနေသင့် ။
ဒါဟာတရုတ်လောင်းကစားရုံ၌ဒေသခံအရာရှိများကကစားရန်တားမြစ်ထားကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပြီး, သင်တို့ကိုလည်းကင်မရာများနှင့်အခြားကြီးမားသောပစ္စည်းကိရိယာများမယူနိုငျသညျ။ ထိုအခါယေဘုယျစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၏ကျန်ကမ္ဘာတဝှမ်းလုပ်ကိုင်ရန်သောသူတို့နှင့်ဆင်တူကြသည်။
တရုတ်လောင်းကစားလုပ်ငန်းနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့အင်္ဂါရပ်ရေပေါ်ကာစီနိုဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းခန်းမသင်္ဘောများပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးနှင့်မကာအိုသို့သွားရောက်မတတ်နိုင်သောသူအပေါင်းတို့တရုတ်ဖွင့်လှစ်ဖြစ်ကြ၏။ ကစားသမားဥပဒေကိုချိုးဖောက်မရှိပဲ, သူတို့ကလုံခြုံစိတ်ချစွာအလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်ရှိရာ, ဟောင်ကောင်ရှိသင်္ဘောပေါ်တက်ရောက်ခြင်းနှင့်ကြားနေရေကိုတစ်ဦးခရီးစဉ်အပေါ်သွားပါ။
တရုတ်အဆက်မပြတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အတူ 1 နေရာကိုယှဉ်ပြိုင်ခြင်း, ဂိမ်းကစားခြင်းလုပ်ငန်းအမြတ်အစွန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ဦးဦးဆောင်အနေအထားကိုယူထားသော။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆန့်ကျင်အစိုးရကမ်ပိန်းနဲ့ဆက်စပ်အမြတ်အစွန်းအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ခုန်, မကာအိုကနေကြီးမားတဲ့ကစားသမားများ၏ထွက်သွားမဟုတ်ဘဲတိုင်းပြည်အတွင်းဂိမ်းကစားခြင်းဇုန်၏အရေအတွက်ကိုတိုးနှင့်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံတရားဝင်ရန်အာဏာပိုင်များ၏အလိုဆန္ဒရှိနေသော်လည်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်လောင်းကစားကနေအမြတ်အစွန်းဖြစ်ပါသည် ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ၏သောင်းချီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနှင့်ပမာဏတိုင်းပြည်ရဲ့ဘတ်ဂျက်အတွက်ဝင်ငွေထက်ပို 50% အထိ။
ထို့အပြင်လောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများမှစုစုပေါင်းဝင်ငွေ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်မိုဘိုင်းဂိမ်း developer များအားဖြင့်ရရှိခဲ့သည့်ဝေစုဖြစ်ပါတယ်။ developer များ၏ဝင်ငွေပြီးသား $ 5.5 ဘီလီယံကိုကျော်လွန်သွားကြပါပြီ, ဤအမှတ်အသား $ 2019-11 ဘီလီယံ 12 နေဖြင့်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
ထို့ပြင်တရုတ်, E-အားကစားများကဲ့သို့လောင်းကစားများ၏အလွန်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဦးတည်ချက်အတွက်။ တိုင်းပြည်နှစ်စဉ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲများတွင်ဆုယူတဲ့သူကစားသမားများအတွက် e-အားကစားနှင့်ထောက်ခံမှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ပြည်နယ်အစီအစဉ်ကိုရှိပါတယ်။ E-အားကစားများအတွက် software ကို၏တရားဝင်ရောင်းချပိတ်ပင်ထားကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းတရုတ်၏ဂိမ်းစတူဒီယိုနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက်အကြံပိုင်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏ပေးသွင်းသူများဖြစ်ကြသည်။ ပြင်ပ၏နိယာမအပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်, တရုတ် programmer တွေကြီးမားင်ငွေရရှိကြသည်။
ဒါဟာတရုတ်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားတင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်နှင့်လုံးဝနီးပါးဖျက်ဆီးခံရကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။ တိုင်းပြည်အစိုးရကမည်သည့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားတားမြစ်ထားသည့်တင်းကျပ်သောမူဝါဒမှလိုက်နာစောင့်ထိန်း။ ပင်သွယ်ဝိုက်ဂိမ်းတွင်ကျယ်စွာအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးသောသူတို့ကိုက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူတစ်ဆက်မပြတ်ရုန်းကန်ရှိပါသည်။
၏သင်တန်း, တရုတ်ဘယ်သူ၏အော်ပရေတာ, လောင်းကစားတရုတ်နိုင်ငံသားများနှင့်စပ်ဆိုင်သောစိတ်ကို သိ. မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားမှာသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ငံခြားအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, အမျိုးမျိုးလာရောက်လည်ပတ်နေကြသည်။ ဒါပေမယ့်တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့, ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုပညတ်တရားအားဖြင့်တင်းကြပ်စွာအပြစ်ပေးဖြစ်ကြသည်။
လောင်းကစားဝိုင်း၏ဤဦးတည်ချက်မဖွံ့ဖြိုးဘူးဆိုတာအဓိကအကြောင်းပြချက်များနှင့်အရိပ်ကနေသူ့ရဲ့ပေါ်ပေါက်ရေးတို့အတွက်အလားအလာအလွန်ကြီးစွာသောမဟုတ် - ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဤအပိုင်းကိုအတွင်းနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များကို၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခြေအနေကပြောင်းလဲနှင့်မကာအိုအတွက်မြေယာကာစီနိုလောင်းကစားရုံကနေဝင်ငွေလျှင်မြန်စွာကျဆင်းဦးမည်ဆိုပါကတရုတ်အာဏာပိုင်များအွန်လိုင်း segment ကို၎င်းတို့၏သဘောထားကိုပြန်လည်စဉ်းစားလိမ့်မည်ဟုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
2015 ခုနှစ်, မကာအိုအတိတ်နှစ်အနည်းငယ်အထွက်နှုန်းအတွက်စံချိန်တင်ကျဆင်းမှုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ အတော်များများကအမြင့်ဆုံး roller ဂိမ်းဇုန် left နှင့်ပြည်ပမှကစားသမားများ၏ရောက်လာအကြီးအကျယ်မကာအိုသွားရောက်လည်ပတ်၏စည်းမျဉ်းများ၏တင်းကျပ်မှုကြောင့်, ယုတ်လျော့ခဲ့သည်။ ဒီတော့ဥပမာ, ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရရှိရေးတို့အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုထိုကဲ့သို့သောအစိုးရဆောင်ရွက်ချက်များအတွက်မကာအိုဂိမ်းဇုန်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်ဆန္ဒပြမှုများတစ်လှိုင်းကိုနှိုးဆော်ကြပြီစသည်တို့ကို, junket အော်ပရေတာများ၏ပြုပြင်အခြေအနေများပိုမိုရှုပ်ထွေးဖြစ်လာကြပါပြီ, ပြောင်းလဲသွားတယ်ပါပြီ။
သို့သော်ကျွမ်းကျင်သူများဒီနှစ်တရုတ်ဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်နောက်ဆုံးအမြတ်မရသောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏။ မကြာမီအခြေအနေတည်ငြိမ်မည်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကင်ပိန်းကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်, တိုင်းပြည်၏အဘို့ဤစက်မှုလုပ်ငန်း၏အရေးပါမှုကိုနားလည်သောအစိုးရ, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပိုအဆင်ပြေအခြေအနေများဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
ကမ်ဘာပျေါမှာတရုတ်ကအရမ်းအလုပ်ကြိုးစားသောလူမြိုးဖွစျဖို့လူသိများကြသည်။ သို့သော်ဤလူမြိုးကိုလုံခြုံစွာနေတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုဟုခေါ်တွင်စေနိုင်သောအခြားအင်္ဂါရပ်လည်းမရှိ။ ဤသည်လောင်းကစားဝိုင်းတစ်ခုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ချစ်ရာရောက်၏။ ရှားပါးတရုတ်မဆိုဂိမ်းအတွက်အလောင်းအစားအောင်သို့မဟုတ်ထီလက်မှတ်တွေ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုဝယ်ယူ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင့်ရဲ့အာရုံကြောယားဖို့အပျော်အပါးငြင်းဆိုသည်။ တရုတ်မှာတော့လောင်းကစားဝိုင်းဥပမာ, mahjong ဆိုဖြစ်ရပ်အတွက်ငှါ, တကအားလပ်ရက်မဟုတ်ပါဘူးလျှင်ပင်။
တရုတ်ဗမာတွင်ပုံစံတူစာပိုဒ်စွဲစိတ်ဝင်စားဖို့စာရွက်စာတမ်းများအများကြီးထားထားတဲ့ဟာအလွန်ရှည်လျားထူးခွားသမိုင်း, ရှိပါတယ်။ ဤတိုင်းပြည်များတွင်လောင်းကစား၏ပထမဦးဆုံးမှတ်တမ်းများသူတို့ကအနည်းဆုံး 4000 ခုနစ်နှစ်ဖြစ်ပါ၏ဆိုလိုတာကပထမမင်းဆက်၏နန်းစံစဉ်ကာလအတွင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ တရုတ်ကကမ္ဘာကြီးကိုယမ်းမှုန်, စက္ကူနှင့်အခြားလက်တွေ့ကျတဲ့တီထွင်မှုသာပေးထားပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောထီ, mahjong သို့မဟုတ် Pai Gow အဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများသိရသည်။
သတ္တမရာစုအေဒီကနေတရုတ်နိုင်ငံ, အတော်ကြာရာစုနှစ်လောင်းကစားဝိုင်းအဘို့တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောသူမြောက်မြားစွာအဖွဲ့အစည်းများ, တာဝန်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါချမ်းသာကလူပိုလောင်းကစားဝိုင်းအိမ်များထင်ရှားဖြစ်လာသည်။ ဆယ်ခုနစ်ရာစုနှစ်များစွာမှတဆယ်လေးမှာတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဂုဏ်အသရေအဖြစ်ယူဆခြင်းနှင့်များပြားလှသောအကျိုးအမြတ်ယူဆောင်ခဲ့သည်။ မကြာခဏကအကျင့်ပျက်အရာရှိများပူးပေါင်းထားတဲ့နှင့်အတူပြစ်မှုဆိုင်ရာကမ္ဘာ၏ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ပတ်သက်။
စံဆယျကိုး၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင် - အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတရုတ်ပြည်ရှိလောင်းကစားဝိုင်း၏ဗဟိုရှန်ဟိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်တိုင်းပြည်လုံးကိုထောင့်ကနေကစားသမားကိုဆွဲဆောင်။ တောင်မှထို့နောက်သင်သည်များစွာသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံရပ်ခြားဂိမ်းထဲမှာကစားနည်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာကြီးမားတဲ့လောင်းကစားရုံရှိခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားအဖွဲ့အစည်းများရှန်ဟိုင်း၏ပြင်သစ် Concession နှင့်ရှန်ဟိုင်းနိုင်ငံတကာအခြေချရှိကြ၏။
1847 ခုနှစ်တွင်ပေါ်တူဂီအစိုးရမကာအိုမှာရှိတဲ့လောင်းကစားတရားဝင်။ နောက်ပိုင်းတွင်နေဆဲသူတို့လုပ်ကိုင်ရန်ဆက်လက်ပေါ်တူဂီအုပ်ချုပ်သော, တရုတ်ပြည်တွင်းစစ်၏ရလဒ်တိုင်းပြည်အတွက်အားလုံးလောင်းကစားရုံအဆုံးသတ်ထားသည့်ကွန်မြူနစ်အစိုးရ, နန်းထိုင်၏အဖြစ်, ဒါပေမယ့်မကာအို၌တည်၏။
ဘယ်အချိန်မှာ 1999, မကာအို, ဖြစ်ပျက်မပြုခဲ့လောင်းကစားဝိုင်းစပ်လျဉ်းပညတ်တိစသောအပြောင်းအလဲတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ 2002 ကတည်းကဒီမှာကာစီနိုလောင်းကစားရုံနိုင်ငံခြားသားတွေဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လောလောဆယ်, ဂိမ်းများများစွာကမ်းလှမ်းနှင့်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံဥပဒေရေးရာနေအိမ်ရှိရာတရုတ်အတွက်သာနေရာအရပ်ဖြစ်သည့်ထက်ပိုသုံးဆယ်မကာအိုလောင်းကစားရုံရှိပါတယ်။ 2010 ခုနှစ်, မကာအိုအကြောင်းကိုနှစ်ဆယ်ငါးသန်းကသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်နှင့်ထို့ထက် ပို. သူတို့ထဲကထက်ဝက်ကျော်လောင်းကစားရုံများတွင်ကစားခဲ့။
နီးပါးတရုတ်တလွှားသင်သည်မြင်းလူမျိုးအပေါ်အလောင်းအစားနိုငျသညျ, မကာအိုနှင့်ဟောင်ကောင်တွင်တရားဝင်ထီဖြစ်ကြသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသားအများအပြားသည်ဤ cruises စဉ်အတွင်းဘုတ်အဖွဲ့အပေါ် operating တစ်ဦးလောင်းကစားရုံများတွင်ကစားရန်အကြောင်း, သင်္ဘောများအတွက်ရေတိုရေရှည်ခရီးသွားစေခြင်းငှါစေလွှတ်နေကြသည်။
ဒါပေမယ့်လောင်းကစားလုပ်တဲ့တရုတ်၏ထိုကဲ့သို့သောမေတ္တာသည်အကြောင်းပြချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်, သမိုင်းမှဖွင့်ရန်လုံလောက်သည်မဟုတ်။ ဤမေးခွန်းကို၏လေ့လာမှုကတရုတ်ယဉ်ကျေးမှု၏တစ်ဦးစာမေးပွဲလိုအပ်သည်။ ဒါဟာကျနော်တို့ကအာဏာပိုင်များ၏အားပေးမှုအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ကြောင်းတစ်ချိန်ကမှာလို့ပြောသင့်ပါတယ်။ ဤလူများ၏အထင်ရှားဆုံးကအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစွန့်ပစ်နှင့်အများပြည်သူအမိန့်တစ်ခုခြိမ်းခြောက်မှုစဉ်းစား, ငွေဂိမ်းအတည်ပြုခြင်းမရှိပေ။ ထိုကွောငျ့, တစ်ကျယ်ပြန့်အင်ပါယာကိုထိန်းချုပ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲဖြစ်ရပြီသူမင်းအရာရှိ, အစဉ်အမြဲလောင်းကစားဝိုင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်နှင့်ပင်သူတို့မကြာခဏတားမြစ်သည်။
တရုတ်ဒဿနအမြင်များကွန်းဖြူးရှပ်ဝါဒ, Taoism နှင့်ဗုဒ္ဓဝါဒ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခဲ့ကြသည်။ သူတို့အထဲ၌အာရုံကိုအများကြီးပိုမိုမြင့်မားအာဏာသက်ရောက်မှုမှပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ကမ္ဘာရှိသူတို့ထက် သာ. ကြီးမြတ်အတိုင်းအတာအထိတရုတ်ကစားသမားကံကြမ္မာနှင့်ကံကိုယုံ။ ထိုသူတို့အဘို့, အဆောင်လက်ဖွဲ့တစ်ခုအလွန်အရေးကြီးသောအမျိုးမျိုး, တ္ထုများ၏တည်နေရာ, ရက်စွဲနှင့်နံပါတ် (နာမည်ကြီး numerology) (Feng Shui မှတ်မိ) ။ ဤအမှုအလုံးစုံကိုမကြာခဏလောင်းကစားစွဲမှဦးဆောင်သည့်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်၏ထင်ယောင်ထင်မှားဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
စကားမစပ်တရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာလောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်မှီခိုများသောအားဖြင့်တစ်ဦးစိတ်ရောဂါအဖြစ်မှတ်မထားပါ။ ထိုသို့သောအမြင်တစ်ခုကငျြ့ဝတျအချက်အနေဖြင့်ဆိုးရွားဖြစ်စဉ်းစားနေကြတယ်, နှင့်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများတွင်ဘုံဖြစ်သကဲ့သို့လူအနည်းငယ်, ထိုသူတို့အဘို့တောင်းပန်ပါတယ်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ဖြူးရှပ် "ဟုလျောက်ပတ်သောယောက်ျားသည်ပိုက်ဆံမကစားဘူး။ " အဲဒီဖော်ပြထား
ဒါဟာအစအကောင့်ထဲသို့တရုတ်လူမျိုး၏စိတ်ပညာအပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သောလူမှုရေးအချက်များတာကျိုးနပ်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ဤတိုင်းပြည်ရှိလူသန်းပေါင်းများစွာဆင်းရဲမွဲတေမှုကနေတည်ငြိမ်အနေအထားဖို့ခက်ခဲလမ်းကြောင်းကိုကျော်လွှားနှင့်ပင်သာယာဝ။ သင်သိသည့်အတိုင်းမနေ့ကအမြန်ချမ်းသာလာမှစီမံခန့်ခွဲသူကိုဆင်းရဲသောသူ, အလွန်မကြာခဏသူပိုက်ဆံညာနဲ့လက်ဝဲပစ်နိုင်သောကမ္ဘာတွင်ပြသနိုင်ဖို့လိုသည်။ များစွာသောတရုတ်အပျော်အပါးအဘို့သက်သက်သာကစားကြောင်းငြင်းခုန်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
အချို့သောဒေသများရှိကာစီနိုလောင်းကစားရုံများမရှိခြင်းသည်ဤဒေသ၏လူဦးသည်ငွေမကစားကြဘူးမဆိုလိုပါမေ့မထားပါနဲ့။ ဥပမာအားဖြင့်, mahjong ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့တိုင်းပြည်အနှံ့ကိုမှန်ကန်နှုန်းထားများနှင့်အတူကစားသည်။ ဤဂိမ်းတွင်အကြီးအစိတ်ကိုအဘို့ဘားဂျွမ်းကစားသမား, သက်ကြီးရွယ်အိုများများအတွက်အသုံးဝင်သောနှင့်ပါတီများအမြိုးမြိုးအဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်စဉ်းစားသည်။ သူမ၏ကစားများတွင်ပင်မင်္ဂလာဆောင်နှင့်အသုဘမှာ။
မကာအိုမှာရှိတဲ့လောင်းကစားလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာသော်လည်းတရုတ်အစိုးရ၏တိုင်းပြည်၏ကျန်အတွက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံဖြေရှင်းရေး၏စိတ်ကူးကိုထောကျပံ့မပေးပါဘူး။ ထို့အပွငျကတက်ကြွစွာတည်ဆဲအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံပိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ 2010 များတွင်ဤထူထောင်မှုများစွာ၏လှုပ်ရှားမှုများရပ်စဲနှင့်အာဏာပိုင်များနီးပါးတရာသန်းဒေါ်လာအွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏အော်ပရေတာသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
သို့သော်အစိုးရရပ်တန့်နှင့်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုသူတို့ကိုလင့်များပေးသောဆိုဒ်များကိုလွှဲပြောင်းယူခဲ့ပါဘူး။ ဤမူဝါဒထိုကဲ့သို့သောဖျော်ဖြေမှုတရုတ်ပရိတ်သတ်တွေမချန်မထားပါဘူးမျှအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်, ဤစက်မှုလုပ်ငန်းနီးပါးတိုင်းပြည်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။ တောင်မှနိုင်ငံခြားအော်ပရေတာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်း၏အန္တရာယ်ကို run ပါဘူး။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ - ကနှစ်လိုဖွယ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် pricked ဖြစ်ပါတယ်
တရုတ်တစ်ဦးလောင်းကစားရုံရှိပါသလား? အဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှုရှိ, ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အ။ မကာအို - ဒါပေမယ့်တကယ်တော့သူတို့ကသာတစ်ခုတည်းလောင်းကစားဝိုင်းဇုံအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ယင်းကျယ်ပြန့်တိုင်းပြည်၏ကျန်ခုနှစ်တွင်အားလုံးနီးပါးလောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်တစ်ဦးစုစုပေါင်းပိတ်ပင်မှုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဘယ်လိုတရုတ်လောင်းကစားကသူ၏ဝါသနာဆုံးရှုံးကြောင်းဖြစ်သနည်း Read!
လောင်းကစားနှင့် ပတ်သက်. ဥပဒေများ - လောင်းကစားဝိုင်းမကာအို မှလွဲ. နေရာတိုင်းတရားမဝင်ဖြစ်၏
မကာအို - တရုတ်ပြည်ရှိအခွင့်အာဏာလောင်းကစားဝိုင်းဇုံ။ အားကောင်းတဲ့ပြိုင်ဘက်ပင် Las Vegas မှာ;
ရေသို့မဟုတ် "မျော" ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအပေါ်တရုတ်အတွက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ;
အဆိုပါ PRC တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ:
နိဂုံးဘယ်မှာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တရုတ် play သလော
လမ်းမများပေါ်တွင် mahjong နှင့် go - ဤဂိမ်းတားမြစ်ထားသောကြသည်မဟုတ်,
ပင် VII မှာရာစုအတွင်း - တရုတ်လောင်းကစားအိမ်များအခြားမည်သူမဆိုမတိုင်မီဖွင့်လှစ်ရန်စတင်! ပင်အီတလီကိုသာ XII ရာစုတစ်ဦးလောင်းကစားရုံစုစည်းဖို့စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ပြင်သစ်နှင့်ပင်နောက်ပိုင်းတွင်။
တရုတ်မြေတပြင်လုံးသမိုင်းကိုအနီးကပ်လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ တိုင်းပြည်ဖြစ်လာအဆိုပါချမ်းသာ, ပိုကောင်းစီးပွားရေး, ပိုမိုပွင့်လင်းလောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကြောင့်သူတို့ကအရမ်းမကြာခဏမာဖီးယားဂိုဏ်း၏တောင်ပံအောက်မှာခဲ့ကြပြီဖြစ်ပျက်, သူ့ကြီးမားတဲ့အမြတ်အစွန်းကိုဆောင်ခဲ့၏။
အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့, နှစ်ဆယ်ရာစုအလယ်အထိ, လောင်းကစားဂိမ်းတိုင်းပြည်၏မြို့တော်ရှန်ဟိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာတစ်ခုလုံးကိုရပ်ကွက်လောင်းကစားရုံ built ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့တော်ဝင်ဧည့်သည်များအစေခံရန်အဆင်သင့်, ကြီးသောအဖွဲ့အစည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကသာအာရှ, ဥရောပနှင့်အမေရိကတိုက်တွင်ထင်ရှားခဲ့သမျှသောဂိမ်းများကိုကစားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ်လောင်းကစားဝိုင်းတစ်ဟောင်ကောင်ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တရားရုံးများတွင်, အထူးလောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှုနှင့်လုံးဝနီးပါးတိုင်းထောင့်ရှိလမ်းများပေါ်တွင်ကဒီမှာကစားခဲ့ပါတယ်။
တက်ကြွစွာမကာအိုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးညာဘက်ကိုနောက်တံခါးကိုလောင်းကစားဝိုင်းတစ်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီ 1999 သည်အထိယခင်။
ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းဥပဒေ, 1949 အတွက်မွေးစားခဲ့ပါတယ်။ ထိုမင်းသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ခြွင်းချက်ဘွတ်အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကမြင်းပြိုင်ပွဲနှင့်ဘောလုံးပွဲလောင်းခွင့်ပြုထားပါသည်။
နောက်ထပ်ချွင်းချက်အဆိုပါထီဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်မှာတော့သူတို့အားလုံးအမျိုးသားရေးဖြစ်ကြသည်။ ပုဂ္ဂလိကအော်ပရေတာကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုတင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။ ဤကိစ္စတွင်အမျိုးသားထီထံမှရရှိသော, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်လူမှုရေးအစီအစဉ်များမှညွှန်ကြားလျက်ရှိသည်။
သငျသညျကိုဘယ်လိုမကာအိုအဖြစ်သနည်း ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ ဤသည်စိုးမိုးရေးထေူအခြားခြွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပျေါတူဂီကာစီနိုလောင်းကစားရုံခွင့်ပြုခဲ့သည်သည့်အခါယင်း၏ပိုင်နက်ကတည်းက, ထို့နောက်တရုတ်ရင်ခွင်မှနယ်မြေ၏ပြန်လာစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ပင်ဤဒေသရှိဖွံ့ဖြိုး။
တကယ်တော့, မကာအိုတရုတ်အတွက်သာဥပဒေရေးရာဂိမ်းဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ 1847 အတွက်ပေါ်တူဂီတရားဝင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ။ ထိုအခါတရုတ် 2002 အတွက်တာဝန်ရှိသူတဦးကခွင့်ပြုချက်ပေးပြီ။
မြေယာ၏ဤအပိုင်းအစသင်ကအရမ်းချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပါအဝင်လောင်းကစားသမားတွေကနေကူပွန် clip နိုင်မည့်တစ်ခုတည်းသောအရပ်ကားအဖြစ်နှင့်တရုတ်ကျော်ကြားမှုမှ rasstaralsya ။ ပျေါတူဂီလောင်းကစားဝိုင်းအောက်မှာ operating နှေးကွေးအတော်များများထွန်းကား။ ရုံဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမှာတော့အားလုံးမှတ်တမ်းများရိုက်အရာဇိမ်ခံအဆောက်အဦ၏အိမ်ရှင်။
ယနေ့တွင်မကာအို Las Vegas မှာလောင်းကစားဝိုင်း၏မြို့တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအောင်နိုင်သူအလွန်လျှင်မြန်စွာဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်သန်းမြို့နှစ်စဉ်ဧည့်သည်များသန်းပေါင်းများစွာ၏သောင်းချီအားဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုသည်။ နိုင်ငံခြားသားတွေဖွင့်ထားလက်နက်နှင့်အတူကြိုဆိုနှင့်ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာတိုက်ဖြည့်ဖို့ 1 1000 နှင့်မဆင်မခြင်လမ်းပူဇော်နေကြသည်။
သို့သော်မကာအိုဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားများလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဒါဟာအချို့ပမာဏ၏အပိုင်အတွက်ဖြစ်, Gongbei အတွက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာခုခံကာကွယ်ဖို့လိုအပ်သောဖြစ်ပြီး, ဆုံးဖြတ်ချက်အရာရှိတဦးဖြစ်သည်မဟုတ်။ လောင်းကစားအရာရှိများပညတ်တရားအားဖြင့်တားမြစ်ထားပါသည်, ဒါသူတို့မတော်တဆအများပြည်သူရန်ပုံငွေလှဲသုံးစားမကျင့်သည်။
ဟောင်ကောင်ရှိရေပေါ်ကာစီနို - တရုတ်မကာအိုသို့မသွားနိုင်လျှင်, သူတို့သည်သို့ရာတွင်အခြားရွေးချယ်စရာနေဆဲဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမမျှ, ဒီတရားရုံးပေါ်မှာကစားခွင့်ပြုမထားပေ။ သို့သော်နိုင်ငံတကာရေပိုင်နက်ထဲမှာမပါတရုတ်ပြုခဲ့ပြုမူကြပါဘူး။ ထိုသို့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နောက်ပြီးသဘောထားပြင်းထန်, လျှံအလင်းအိမ်အဲဒီမှာညွှန်ကြားထားသည်။ တရုတ်ရေပိုင်နက်ထွက်ခွာ, သင်္ဘောရှည်လျားသောညဉ့်လုံးလောင်းကစားအတွက်လုပ်ကြစေခြင်းငှါသွားရောက်ကြည့်ရှု။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားလစ်ကွက်ဟာကွက်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလွန်အောင်မြင်စွာဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများရေယာဉ်များဇိမ်ခံထဲမှာ "တိုက်တန်းနစ်။ " ယုတ်ညံ့မဟုတ်သူတို့ကခေတ်သစ်လောင်းကစားရုံပစ္စည်းကိရိယာများအပြင်၌ရှိကြ၏မကာအိုကျောင်းများ, ရေကူးကန်များ, အားကစားခိုင်ခိုင်လုံလုံ, စားသောက်ဆိုင်များ, ဖျော်ဖြေပွဲခန်းမရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ပိုပြီးဆိုးရွားမပေးပါ။
စက်လှေများနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူရှိပါတယ်, ဥပမာ, တွဲရေယာဉ်အဖြစ်ပြောင်းလဲ။ Neroskoshno, ဒါပေမယ့် $ 38 ထံမှကုန်ကျညဥ့်ဂိမ်းတစ်ခုလက်မှတ်။
ဒါဟာတရုတ်ကို virtual မှအစစ်အမှန်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှမိမိတို့စိတ်အားထက်သန်ရွှေ့နိုင်သောထင်ရပေသည်။ သို့သော်ထိုသို့မျှမရှိ။ တရုတ်မှာတော့အလွန်တင်းကျပ်သောအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများ၏လှုပ်ရှားမှုတားမြစ်ဥပဒေများနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းဖျော်ဖြေရေးပူဇော်ဆိုဆိုဒ်များရှိပါတယ်။
ပညတ္တိကျမ်းကိုချိုးဖောက်ဘို့လုပ်ရပ်များပြစ်မှု။ သင်ရုံဒဏ်ငွေပေးဆောင်, ဒါပေမယ့်လည်းထောင်ထဲမှာထိုင်လို့မရပါဘူး။
တရုတ်ပိုင်နက်တွင်အွန်လိုင်းမှလောင်းကစားရုံစစ်ဆင်ရေးချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဆာဗာ, ငွေပေးချေမှုစနစ်များ, နေရာတားမြစ်သည်။ အစိုးရကလည်းကမ္ဘာ့အရင်းအမြစ်များကို filter မှ၎င်း၏အကောင်းဆုံးလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဒ်များကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံပိတ်ဆို့နှင့်စျေးဆိုင်, ဒါပေမယ့်လည်းဖဲချပ်ဝေခန်းများနှင့်ပင်ဤဆိုဒ်များ၏တဦးတည်းကို advertise ကြောင်းအရင်းအမြစ်များကိုအလောင်းအစားမသာ။
ကွန်ပျူတာလူများ၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှကိုလညျးတတျကြှမျးကိုယ်တိုင်တရုတ်နိုင်ငံတွင် IP ကိုအခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ IP ကိုပြောင်းလဲခြင်း, ပိတျပငျကျော်လွှားဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့်တရုတ်က virtual ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဤအဆင့်တွင်ဤလှည့်ကွက်ကို detect နိုင်အောင်အသိဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်မှဤကဲ့သို့သောထင်ရသောနောက်ပြောင်မှုများအဘို့အပြစ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုကိုဆွဲဆောင်။
0.1 ထိပ်တန်း 10 တရုတ်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
4 တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ - ကနှစ်လိုဖွယ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် pricked ဖြစ်ပါတယ်
4.1.3 အနှစ်ချုပ်: ဘယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံတွင်လောင်းကစား